Playnomics: Sicirka Qiimaha Qaadashada Abka Moobilka (AVP) | Martech Zone
Playnomics: Sicirka Qiimaha Saadaasha App App (AVP)
Arbacada, Nofeembar 13, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Iibinta arjigaaga moobiilku waa mug weyn, istiraatiijiyad qiimo-yar sidaa darteed helitaanka hoggaanno iyo hubinta hoggaamiyeyaashaas inay beddelaan, ku sii nagaadaan, oo u kacaan macaamiisha. Jawiga suuq-geynta ee kanaallo badan, waxaa muhiim ah in la fahmo halka aad ka helayso tayada ugu wanaagsan ee maalgashiga. Taasi laguma cabbiro si fudud oo ah qarash-riix kasta - the qiimaha nolosha macaamiisha wareega waa in sidoo kale la fahmo.
Qiimaha inta uu nool yahay macaamilku (CLV ama CLTV), qiimaha macaamilka inta uu nool yahay (LCV), ama qiimaha nolosha qofka isticmaala (LTV) waa saadaalin ah faa iidada loo aaneynayo dhammaan xiriirka mustaqbalka ee macaamilka muddada xiriirka ay la leeyihiin astaantaada, alaab ama adeeg.
Maamulayaasha suuqgeyntu waxay saadaalin karaan qiimaha nolosha macaamilka oo ay dib ugulaaban karaan maal gashiga gudahood maalmo gudahood la wareegida ololeyaasha iyadoo la saadaalinayo Qiimeynta Hantida 'Playnomic' oo leh 75% sax ah. Qaadashada Qiimaha Saadaashu wuxuu u oggolaanayaa suuqleyda inay aqoonsadaan kanaallada bixiya soo celinta ugu weyn maalgashiga. Suuqleyda ayaa markaa dib uqeejin kara xayeysiinta qarash gareynta kanaalada waxqabadka iyo ololayaasha waqtiga dhabta ah ee ugu badnaan ROI.
Natiijooyinka ka soo baxay AVP ee beta xiran waxay muujinayaan in 5% dadka isticmaala ay saadaaliyeen inay ugu qiimo badan yihiin aaladda AVP, oo lagu xisaabtamo in ka badan 75% dhammaan dakhliga 45 maalmood ee ugu horreeya. Laga bilaabo maanta dhammaan horumariyeyaashu waxay u furan yihiin inay ku biiraan beta furan si hore loogu helo AVP.
Si sax ah u saadaalinta moobiilka, hab-dhaqanka isticmaalaha barnaamijka ayaa ah aragtida ugu qiimaha badan ee suuq-geygu ku yeelan karo qashinkooda. Natiijooyinka hore waxay muujinayaan aaladdayada AVP waxay saadaalinaysaa qiimaha nolosha ee rakibidda oo leh in ka badan 75% saxnaanta kanaalka suuqgeynta, ha ahaato mid lacag la siiyay, u gudbin ama ilo dabiici ah. Waa boodbood weyn oo horay loogu qaaday hagaajinta qarashka ololaha iyo ku xirnaanta maareeyayaasha soo iibsiga isticmaalaha. Chethan Ramachandran, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Playnomics
Iyadoo aan la helin cabirro saadaalin ah, xisaabinta maalmaha ROI iyo maalmaha dib u soo celinta ilaha helitaanka iyo ololaha suuqgeynta ayaa u baahan kara bilooyin xog aruurin oo laga helayo ilo badan oo kala duwan. Iyadoo la adeegsanayo AVP, waxaa hadda suurtagal ah in laga saaro suuqleyda hubin la'aanta ah ee soo food saartay helitaanka macaamiisha qiimaha ugu sarreeya iyagoo awood u siinaya saadaalin sax ah halkii ay ku iibsan lahaayeen qiime keliya. Saadaalinta Qiimeynta Qaadashada waxay isticmaashaa xargaha barashada mashiinka horumarsan ee Playnomics oo si joogto ah u soo ururiya, u falanqeynaya, uguna sarreysa dabeecadaha isticmaalaha saadaalin weyn oo saadaalin ah, xitaa iyadoo si dhaqso leh u beddeleysa jawiyada dhijitaalka ah.
MobileAppTracking, sifo Analytics madal la shaqeysa macaamiisha sida Supercell, EA, Square, iyo Kayak, oo dhowaan iskaashi la sameeyay Playnomics si ay u siiso Macaamiishooda Qiimaynta Qaadashada.
MobileAppTracking waxay siisaa suuq-galiyayaasha barnaamijka hal SDK oo ah u-danayn aan eex lahayn. Ku biirista AVP, macaamiisheennu waxay saadaalin karaan qiimaha nolosha ee wada-hawlgalayaasha xayeysiinta iyo kanaalada, iyagoo si wax ku ool ah u muujinaya astaamaha hore ee ilaha ay u badan tahay inay noqdaan ROI togan. Helitaanka isbeddellada saadaalinta ah ee sidan oo kale ah ayaa wax ka beddelaya ciyaarta suuqgeeyayaasha barnaamijyada doonaya inay si dhakhso leh u hagaajiyaan ololahooda waxqabadka wanaagsan. Peter Hamilton, Maamulaha guud ee Wax -qabadyo
Tags: saadaalinta qiimaha helitaankaavpqiimaha nolosha macaamiishaqiimaha noloshasaadaaliyaha qiimaha noloshaadaltvapp mobilecodsiga mobilesmartphoneapp app
Medallia: Hagaajinta Khibrada Macaamiisha B2B